भित्र-घर वा आउटसोर्सिंग? Semalt सेयरहरू अनलाईन मार्केटिंग प्रबन्धकहरूको लागि उपयोगी सल्लाहहरू
अनलाइन मार्केटिंगका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू फर्मको लागि एसईओ गर्नका लागि उत्तम तरीका कुन हो भनेर सोच्न सक्दछन्। एक DIY को लागि प्रविधिहरू सिक्नु राम्रो तर सस्तो तरीका हुन सक्छ, तर चाँडै नै आवश्यक क्षमतालाई पूरा नगरीकन वा राख्ने जोखिमको सामना गर्न सक्दछ। यो स्थितिले तपाईंको एसईओ अभियानहरूमा तेस्रो पक्ष समावेश गर्ने आवश्यकता ल्याउँछ। तेस्रो पक्षले तपाइँलाई इन्टरनेट मार्केटिंगको साथ मद्दत गर्न एक योग्य प्रोफेशनललाई भर्ती गर्न सक्छ वा तपाइँको वेबसाइटलाई रैंकिंगमा सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावको लागि एक सम्मानित एसईओ फर्ममा जाँदैछ।
कुनै जादुई विधि वा स्पर्शले कुनै पनि क्षेत्रमा सफलताको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। प्रत्येक इन्टरनेट मार्केटिंग आवश्यकता अद्वितीय छ। इन्टरनेट मार्केटिंगको विभिन्न कम्पोनेन्टहरू DIY दृष्टिकोणसँग राम्रोसँग काम गर्न सक्दछन् जबकि अन्य विशेषज्ञहरू द्वारा प्रस्तुत गर्दा उत्कृष्ट हुन्छन्। अन्य अवस्थामा, एसईओ फर्महरू जसको प्रतिष्ठा छ संसाधन हुन सक्छ। सफल भएका अन्य तरिकाहरूमा विभिन्न तीव्रताका साथ एक वा बढी विधिहरूको संयोजन समावेश छ।
रस्ट बार्बर, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, tips सुझावहरूको एक सूची कम्पाइल गरेको छ जुन तपाईंको अनलाइन मार्केटिंग अभियानमा संसाधन हुन सक्छ:
१. बजेट र लागत
यो पूरा कार्य घर वा आउटसोर्समा चाहे कत्तिको आवश्यक पर्दछ भन्नेमा कारक हुनु आवश्यक छ। अनुमानमा एक युग समय र थकानमा पनि कारक गर्न असफल भइरहेको छ। समय भनेको पैसा हो, र यो नै तपाईंको संलग्नता र चासो हो। व्यावहारिक रूपमा भने, आउटसोर्सिंग महँगो हुन सक्छ र यो घरमा गरेको भन्दा बढी कोषको आवश्यकता हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, USD०० अमेरिकी डलर भन्दा कमको बजेटले आउटसोर्स हुँदा सफलताको प्रतिज्ञा गर्न सक्दैन। एक फर्म पूर्ण मासिक / वार्षिक योजनाको लागि USD००० अमेरिकी डलर चार्ज गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक प्रवेश स्तर शुल्क हो। घर टोलीको व्यवस्थापन वा समान काममा तलब पाएका मजदुरहरूलाई बढी रकम चाहिन्छ।
२. व्यवसाय मोडेल
एउटा कम्पनी जुन ग्राहकका लागि पूर्ण रूपमा इन्टरनेटमा निर्भर गर्दछ केही घर प्रशिक्षण र चलाउनको लागि सुझावको आवश्यक पर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाइँको व्यवसाय को लागी एक लाख डलर जस्तै ठूलो आंकडा गरीरहेको छ। यो व्यवसाय एक महत्वपूर्ण सेटअप हुन सक्छ जुन SEO सुझावहरूमा ज्ञानको लागि प्रशासकलाई आवाश्यक हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, मार्केटिंगका लागि पूर्ण रूपमा इन्टरनेटमा निर्भर नरहेको कम्पनीले इन-हाउस टीमको आवश्यक पर्दछ।
Expert. विशेषज्ञताको आवश्यक तहको उपलब्धता
जब इन-हाउस विकल्प तपाईंको छनौट हो, तपाईंको व्यावसायिकता बढाउन सिक्नु आवश्यक पर्दछ। अर्को आवश्यकता कामको प्रकार हुनसक्दछ जुन तपाईंको एसईओ आवश्यकता अनुरूप हुन सक्छ। एक कम्पनी जसले तपाइँको लागि एसईओ गर्न आश्वासन दिन्छ तपाइँको अनलाइन मार्केटिंग अभियान लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो रोजगार आउटपुट हुनुपर्छ। उपयुक्त व्यावसायिक स्तरको उपलब्धता हो, त्यसकारण, एक कारक जसले निर्धारण गर्न सक्छ कि इन्टरनेट मार्केटिंग घर वा आउटसोर्सिंगमा गरिन्छ कि हुँदैन।
इन-हाउस पूर्णता बीचमा छनौट गर्नु वा तपाईंको खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) वा इन्टरनेट मार्केटि task कार्यलाई चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ। यो प्रति-क्लिक भुक्तानी वा पीपीसी व्यवस्थापन, सामग्री मार्केटिंग, वेब डिजाइन, अनलाइन खरीद, ब्रान्ड जर्नलिज्म, मोबाइल मार्केटिंग वा ईमेल मार्केटि।, एक DIY वा भाँडा दृष्टिकोण तपाइँले खोजी गरिरहनु भएको हुन सक्छ। यद्यपि छनौट गर्न सजिलो छैन। बजेट / लागत, व्यवसाय मोडेल वा आवश्यक व्यावसायिकता को उपलब्धता जस्ता कारकहरूमा निर्भर गर्दै, एक विचार गर्न उत्तम विधि निर्धारण गर्न सक्षम हुन सक्छ। यो मार्गनिर्देशनले तपाईंलाई उत्तम इन्टरनेट मार्केटि goals लक्ष्यहरू ल्याउन उत्तम दृष्टिकोण वा संयोजन निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।